नेपालगन्जमा आइतबारदेखि विद्यालय बन्द गरिने - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार नेपालगन्जमा आइतबारदेखि विद्यालय बन्द गरिने
शिक्षक र पाँच विद्यार्थीलाई कोरोना देखिएपछि नेपालगन्जका सबै विद्यालयलाई एक साता बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले आफ्नो निर्णयलाई बिहीबार नै बसेको जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को बैठकमा जानकारी गराएको थियो ।
नेपालगन्जमा ह्वाइट हाउसमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले अत्यावश्यक कामबाहेक भारत जान रोक लगाउने बताए । उहाँले भारतबाट फर्किएका नेपालीका लागि नाकामा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने बताए । सीमावर्ती भारतीय बजारमा दैनिक ठूलो संख्यामा नेपालीहरु किनमेल गर्न जाने गर्दछन् । यो खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
Previous articleदिल्लीलाई हराउँदै जारी सिजन राजस्थानको पहिलो जित
Next articleरुरुको आइपियो भयो बाँडफाँड , यहाँबाट यसरी हेर्नुहोस तपाइको नतिजा ?
मेलम्चीमा बाढीले ५० जना बेपत्ता, ५ बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त, ६ पक्की पुल बगे, सप्तकोशी नदी आसपासमा पनि खतरा
मनसुन फेरि सक्रिय, अझै केही दिन पानी पर्ने र यी ठाउँहरुमा भारी बर्षा हुने (आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान)
​बझाङमा टिपर पल्टिदा दुई जनाको मृत्यु तीन जना घाइते